février 2021 - FJKM Amparibe Famonjena
Publié le 21 février 2021 4 avril 2021
Alahady 21 febroary 2021
Alahady 21 feboary 2021
Alahady hitondrana amim-bavaka ny Vondrona manambatra ny fanomezam-pahasoavana (VMFP).
Alahady natokana hitondrana am-bavaka ny Arsiva FJKM sy ny tranombakoka ny anio. Alahady voalohany amin’ny Karemy ihany koa ary eto amin’ny Fitandremana Amparibe dia hitondrana amim-bavaka ny Vondrona manambatra ny fanomezam-pahasoavana (VMFP). Niavaka ny fotoana anio satria dia niara-niombom-bavaka tamintsika ireo zaza kamboty tezaina eny Tangaina miaraka amin’ny Talen’izany toerana izany Ramatoa RANDRIANAIVO Harivelo Beby Hasina, miaraka amin’ny vadiny, dia ny Mpitandrina RANDRIANAIVOARIVELO Rado Bera, Tonia nasionalin’ny Aumônerie eto amin’ny sahan’ny FJKM.
Ireo mpikambana ao amin’ny VMFP avokoa no niandraikitra ny fotoana. Ny Filoha ANDRIANASY Fanja no nitarika. Ny nanao ny vavaka sy ny vakiteny kosa dia RAKOTONDRAFARA RAMAHANDRY Nirina, RABE Harimanana, RABE Faniry ary ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofo no nitondra ny hafatra. Ny litorjia tamin’ny endriny faharoa no nitondran’ny mpitarika ny fotoana.
Ho fiderana an’Andriamanitra dia novakina ny Salamo 89 : 1-7 ary natao ny hira FF 45 : 1, 2 taorian’izany. Natao ny vavaka fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra avy eo.
Feon-java-maneno avy hatrany no nisy taorian’izany ary niroso tamin’ny fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora.
RAVAOARITOMBO Norolalao, mpampianatra K6 no nanatanteraka ny fotoana. Ny Lioka 4 : 8 « Jehovah Andriamanitra no hiankohofanao ary Izy ihany no hotompoinao ». Tantara no nentiny nanazavana izany hafatra izany.
Natao avy hatrany ny hira FFPM 203 : 2, 3 mialoha ny vavaka sy ny famakiana ny Soratra Masina. Ny perikopa anio dia ny Nehemia 9 : 1 – 8, Matio 13 : 47 – 52, I Tesaloniana 2 : 13 – 16.
Natao ny FFPM 205 : 1, 3 mialoha ny vakiteny sy ny toriteny.
Amin’ny maha andron’ny VMFP ny anio dia nivoaka ny perikopa ny Mpitandrina. Ny teny fanevan’izy ireo no nitondrany ny hafatra. Ny Romana 6 :23b izany : « Ary ny fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin’Andriamanitra ao amin’ i Kristy Jesoa Tompontsika ».
Inona moa no tanjona amin’ity VMFP ity ?
Ity bokin’ny Romana ity, manomboka eo amin’ny toko faha dimy hatramin’ny faha valo dia afaka omena lohateny iray manao hoe « Ny marina amin’ny finoana no velona ».
Ny toko tsirairay dia milaza fahafahana avokoa. Ny fahadimy ohatra dia milaza fahafahana amin’ny fahatezeran’Andriamanitra, ny faha enina dia ny fahafahana amin’ny fahotana ary ity faha enina ity no nitondranany ny hafatra.
Ny olona afaka amin’ny fahotana dia :
-Manompo an’Andriamanitra amin’ny fahamarinaNy.
Ny olona, tamin’izany fotoana nanoratana ity boky ity izany, dia gejan’ny ota tanteraka ary mila fanafahana. Ny olona manompo an’Andriamanitra amin’ny fahamarinaNy dia :
Olona manao ny asan’Andriamanitra araka ny sitrapon’Andriamanitra. Tsy ny herin’ny tenany intsony no hivelomany fa miaraka amin’Andriamanitra.
Mitory ny Filazantsaran’i Kristy amin’ny fitiavana.
Manana fahasahiana hijoro ho vavolombelona ho an’ny Tompo.
Toy izany no tokony ho fiainan’ny olombelona izay manompo an’Andriamanitra. Raha ny bokin’i Nehemia, perikopa novakina anio dia hita fa nanao fivoriana masina ireo ary namakiana ny sitrapon’Andriamanitra. Nahatsapa ireo tamin’izany fa tokony hialana ny fahotana. Rehefa izany dia niankohoka ireo ary nibebaka.
Ireo rehetra izay vita Batisa dia tokony mametraka fanontaniana hoe manao ahoana ny fiainako manoloana izany zava-miseho izany. Misy fanapahan-kevitra tokony horaisina ao. Mbola kristiana « ordinaire » sy te hijanona amin’izany ve ianao ? Ny zanak’Israely aza, izay tena nanompo sampy, rehefa nahare ny Teny dia nifona sy nibebaka. Raha tsy mahatsiaro voatsindrona ianao rehefa mihaino toriteny dia tsarovy fa mandalo aminao fotsiny ny Teny.
Mandeha eo anatrehan’Andriamanitra amin’ny fahamasinana
Tokony Andriamanitra no hiandrasantsika sitraka fa tsy tokony izao tontolo izao. Anjarantsika no mandeha eo anatrehan’Andriamanitra amin’ny fahamasinana. Tokony tsy manao ny fanaon’izao tontolo izao isika. Tokony mihavao ny fanahy mba hananana fahamasinam-piainana.
Zava-dehibe izany mandeha amin’ny fahamasinana izany. Ny fiainantsika eo anatrehan’Andriamanitra no mampiavaka antsika. Izay manaraka ny Tompo dia mandova ny fiainana mandrakizay.
Ho an’ireo VMFP, maro ny karazana fanomezam-pahasoavana. Eny, na ny finoana izay hananan’ny tsirairay aza, dia efa fanomezam-pahasoavana lehibe. Noho izany dia tokony ny olona rehetra no ho ao anatin’ity vondrona ity. Nanentana ny kristiana ny Mpitandrina mba hanohana izany asa izany.
Nasain’ny Mpitandrina nitsangana ireo vahiny avy any Tangaina ary nisaotra azy ireo noho ny fahafoizany ny toerana nisy azy ary hiara-hivavaka amin’ny VMFP.
Toy izany ihany koa ny amin’ny Arsiva, tokony hanohana izany asa izany isika satria zava-dehibe eo amin’ny fiainantsika ny fisian’izany.
Namaranan’ny Mpitandrina ny hafatra dia nilaza izy fa tokony hieritreritra foana isika fa Andriamanitra efa nanala ny fahotantsika nefa isika dia mbola miverina amin’izany ihany. Ny olona miorina dia afaka miaina sy mampiseho eo amin’ny fiainany izany fiarahany amin’Andriamanitra izany.
Nisy feon-java-maneno taorian’izany ary nanao ny anjarahirany ny STK.
VAVAKA SETRINY SY TATITRA
Nanao ny vavaka setrin’ny Tenin’Andriamanitra ny mpitarika ary rehefa izany dia nanambara ny Fanekem-pinoana fahatelo ho fanavaozana indray ny finoana sy fiarahana amin’ny Tompo.
Nisy feon-java-maneno taorian’izany ary novakina ny tatitry ny asan’ny VMFP. Anisan’ny voalaza tamin’izany ireto manaraka ireto :
Ny fanoratana lahatsoratra isam-bolana ao amin’ny gazetim-piangonana Taratry ny Famonjena, ho an’ny mpiara-mivavaka ;
Asa tana-maro tao amin’ny Seminera tamin’ny fanadiovana ny fanamboarana zaridaina ;
Ny niarahana tamin’ny Firaisan’ny sampana tamin’ny Krismasy ;
Ny fanomezana valisoa ho an’ireo mpianatra afaka fanadinana ofisialy ;
Ny herinandrom-bokatra 2021 izay niarahana tamin’ny AFF, nanao ny St Valentin, ny fifampizarana tamin’ny resaka Kabary.
Nanao ny hira fanevany moa izy ireo taorian’izany, niaraka tamin’ireo vahiny nasaina avy any Tangaina.
RAKOTOMANANA Andry, Birao Mpitantsoratry ny Fiangonana, no nanambara ny raharaham-piangonana. Anisan’ny voalaza tamin’izany ireto manaraka ireto :
Fivorian’ny Sampana Fifohazana SPA 10 ny 25/02 ao amin’ny FJKM Anosizato Hebrona ;
Misy ny « culte » amin’ny teny anglisy ao amin’ny Paroisse Internationale ny 28/02 amin’ny 8ora hatramin’ny 9 ora, ary hisy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo. Mila misoratra anarana izay hanatrika izany ;
Ny FMMB dia mampatsiahy ny valopy fanohanana, ary hanokatra ny fankalazana ny faha 50 taonany ireo ao amin’ny Katedraly Analakely ;
Hisy ny fivoriana Ankatoky ny Fandraisana amin’ny herin’ny anio ;
Teo amin’ny toetry ny vola dia mitotaly 1 773 100 Ar ny rakitra, fiofanana, voady ;
Hisy ny rindran-kira karakarain’ny Sampana Vokovoko manga, izay mankalaza ny faha 30 taonany ny hariva manomboka amin’ny 2 ora ;
Misy tolotr’asa « Mpamily » nambara ka izay liana amin’izany dia afaka manatona ny sekreteran’ny Fiangonana.
Nanomboka tamin’ity alahady ity dia nisy ny 5 mn ho an’ny fahasalamana. Ka RAKOTOMANANA Andry, izay Dokotera Mpitsabo ihany koa, no nanatanteraka izany. Ny fanasana tanana no nentiny tamin’izany ary nampianatra ny mpianakavin’ny finoana ny amin’ny tena fanaovana izany izy.
Niroso tamin’ny rakitra sy fanomezana, ary ny hira Ffpm 432 : 2 no notanterahina ho fanolorana izany.
Nanao ny anjara hira ireo vahiny avy any Tangaina AKA.FI.TA taorian’izany.
Nanao ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina ary narahina ny hira FF 39 : 1 izany. Novakiana ny tondrozotra ary nomena ny tsodrano. Ny FF 39 : 2 no namaranana ny fotoana.
Nikirakira ny fafana : RANDRIAMASIMANANA Andrinavalona
Nikirakira ny fanamafisam-peo: RANDRIAMAHEFA Tinarivony
Naka ny sary : HARENTSOA Rova
Nitendry orga: RABIAZAMAHOLY Mahery & ny SMZM
Alahady 14 febroary 2021
ALAHADY FAHA 14 FEBROARY 2021
MAMPIORINA NY MINO NY TENIN’ANDRIAMANITRA
“Ary hoy Izy: Izany no nilazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona Ahy, raha tsy nomen'ny Ray azy izany.” Jaona 6 : 65
Misaotra ny Tompo lalandava isika fa afaka niray fo sy fanahy ary niombom-bavaka teto an-tranon’Andriamanitra, androany faha 14 febroary 2021. Ity no Alahady faharoa amin’ny volana febroary , izay alahady faha 6 manaraka ny Epifania ary natokana ho Alahadin’ny Baiboly, eto anivon’ny FJKM. Mbola hibanjinantsika ihany koa ny lohahevitra hoe: “MAMPIORINA NY MINO NY TENIN’ANDRIAMANITRA”.
Ny fotoana androany dia niandraiketan’ny Vaomieran’ny Aim-panahy. RATIARISON Joris, Diakona, no nitarika ny fanompoam-pivavahana. Ny litorjia fahatelo fampiasa eto anivon’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara no notanterahina. Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina no nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Nitendry ny orga RAJAOFETRA Philippe. Rehefa avy niarahaba ny Fiangonana ny mpitarika dia niarahan’ny mpianakavin’ny finoana nanandra-peo ny Salamo faha 95 and. 1-6 ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra: “Avia, aoka isika hihoby ho an’i Jehovah; Aoka isika hanao feo fifaliana ho an’ny Vatolampy famonjena antsika. Aoka hankeo anatrehany amin’ny fiderana isika; Aoka hanao feo fifaliana ho Azy amin’ny fihirana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehovah, Ary Mpanjaka lehibe ambonin’ny andriamanitra rehetra Izy. Eo an-tànany ny fitoerana lalina amin’ny tany; Ary Azy ny tendrombohitra avo. Azy ny ranomasina, fa Izy no nanao azy, Ary ny tany maina dia noforonin’ny tànany. Avia, ka aoka hiondrika sy hiankohoka isika; Aoka isika handohalika eo anatrehan’i Jehovah, Mpanao antsika; Amen !”
Ny hira faha 267 and1,6 “He ny andon’ny maraina” no nasandratra ho fiderana sy fisaorana ny Tompo Andriamanitsika.
Raha nanatanteraka ny vavaka fiderana kosa ny Fiangonana dia toy izao no nambaran’ny votoatin’izany :
“Ry Tompo sy Lohan’ny Fiangonana ary mpanavotra anay o, tonga eto anatrehanao izahay hisaotra sy hankalaza ary hidera ny Anaranao be voninahitra. Tombom-pahasoavana ho anay ny ahafahanay mandia izao fotoana izao, izay natokana ho Alahadin’ny Baiboly. Mahatsiaro tokoa izahay fa fahasoavana lehibe ho anay ny manana ny Baiboly , ilay Teny vavolombelona ho anay, mampiorina anay mba hino Anao. Ry Andriamanitra Tomponay o! tafavory izahay noho ny fitiavanao sy ny antsonao satria notaominao ka voavonjy, nosamborinao ka resinao. Vokiso ny zava-tsoa eto an-tranonano izahay ary aoka ny Teninao tsy hiverina foana Aminao raha tsy efa nahavita izay efa nanirahanao azy. Tariho izahay ary tohano fanahy mazoto mba hahaizanay manome voninahitra Anao mandrakariva amin’ny androm-piainanay. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy miaraka Aminao Rainay any an-danitra ary ny Fanahy Masina . Amen!”
ANDRIANTSEHENO Hanitra, mpampianatra ao amin’ny Kilasy Voalohany no nanatanteraka izany. Ny Lioka 9: 20 no nitondrany ny hafatra: “ Fa ianareo kosa manao Ahy ho iza? Dia namaly Petera ka nanao hoe: Ny Kristin’Andriamanitra.”
Nambara tamin’izany ary fa raha te hahafantatra marina tokoa an’i Jesoa Kristy isika dia amin’ny alalan’ny famakiana ny Teniny no hahafantarantsika izany ary izany no hahafahantsika mifandray Aminy bebe kokoa.
Rehefa vita ny hafatra dia nitsangana ny fianakaviam-ben’ny Sekoly Alahady niaraka nanatanteraka ny hira faha 753 and 1. “Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa’.
Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia noredonin’ny Mpianakavin’ny Finoana ny hira 205 and. 1,2 “Ny Teninao rehetra”.
Nisy ny vavaka ho an’ny Tenin’Andriamanitra izay notanterahan- dRANAIVOSON Voahangy, diakona, ary taorian’izany dia novakina misesy ny perikopa izay voalahatra androany.
Ny Testamenta taloha dia araka izay hita ao amin’ny 2Tantara 34:29-33.
Ny Testamenta vaovao sy ny Epistily kosa dia araka izay hita ao amin’ny Jaona 6:60-71 ary ny Hebreo 6:13-20. RANAIVOSON Jacky, Diakona, no namaky izany.
Mbola ao anatin’ny fibanjinana ny lohahevitra “MAMPIORINA NY MINO NY TENIN’ANDRIAMANITRA” isika ankehitriny. Ho fampiorenana indrindra ny finoana dia tsy toriteny no notanterahin’ny Mpitandrina fa fampianaram-pinoana. Ny teny araka ny Jaona 6 : 65 no nanompanany izany fampianarana izany.
“Ary hoy Izy: Izany no nilazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona Ahy, raha tsy nomen’ny Ray azy izany”.
Tamin’ny fotoana izay nandinihana manokana sy nampianarana ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy araka ny Jaona ity teto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena dia noresahina manokana ny mikasika indrindra ny atao hoe TENDRY MIALOHA ROA SOSONA.
Maneho izany indrindra ity perikopa izay voalahatra hotorina anio ity.
Ity teny ity dia mitovy amin’izay hita ao amin’ny Jaona 6:44 ihany koa.
Eo anoloan’ny fanambaran’i Jesoa sy ny fampianarana izay ataony dia hita fa misaraka roa ny hevitra teo amin’ny fiarahamonina izay mandre ireny fanambarana nataon’ny Tompo ireny.
Ireo mandray sy mino ny Teny
Ny voalohany dia ireo izay mino sy mandray ary miaina ny Teny fa etsy andaniny kosa dia eo ireo izay tsy mino sy mandà ary mimonomonona , tezitra amin’ny Tenin’i Jesoa.
Araka izany ary dia inona tokoa moa no mahatonga ny olona mandray sy mahalala ny fampianaran’i Jesoa ary inona kosa no mahatonga iretsy ankilany izay mandà ny fampianarana, tsy mety mandray ary tsy mety mino fa mimonomonona ary mandao an’i Jesoa.
Mazava ny valin’ireo fanontaniana ireo araka ity perikopa ao amin’ny Jaona 6:65 ity fa ny olona izay nandray an’i Jesoa dia ny olona NOMEN’NY RAY Azy .
Rehefa avy nanatanteraka ilay fahagagana ny Tompo tamin’ny namahanany ny olona tsy omby dimy arivo lahy dia nampianatra ny momba ny mofon’aina Jesoa.
Rehefa vita io fampianarana mikasika ny mofon’aina io dia eto indrindra ny Tompo no manambara fa satria nomen’ny Ray azy ireo dia afaka manatona sy mandray an’i Jesoa izy.
Zavatra telo no azo ambara amin’izany :
Taomin’ny Ray ny olona afaka manatona an’i Jesoa (and. 44)
Ny Ray mihitsy no mitaona ny olona hanatona an’i Jesoa
Ampianarin’ny Ray ny olona hahalala ny zava-miafin’ny finoana.
Ny Tenin’i Jesoa dia Fanahy sy Fiainana (and 63).
Afaka mandray ny votoatin’ny fampianarana ny olona.
Manambara izany indrindra ny fanambaran’i Petera manao hoe: “ho any amin’iza moa izahay, ao aminao no misy ny Tenin’ny fiainana mandrakizay” , ary mbola mambarany ihany koa fa “Jesoa no ilay Masin’Andriamanitra”.
Raha mijery ny voalahatra indray isika araka ny 2 Tantara 34, araka ny perikopa androany ihany dia misy zavatra mahagaga ihany koa satria raha mijery ny tantaran’i Josia mpanjaka isika dia voalaza fa mbola zaza 8 taona izy no nandray ny fanjakana.
Ny anarana hoe JOSIA dia iray tarika amin’ny hoe JESOA, ary ny heviny aza dia mitovy ihany dia ny hoe Jehovah no mpamonjy.
Rehefa feno 16 taona i Josia dia efa nihevitra ny hamerina sy hanadio ny fivavahana teo amin’ny Israely izay tao anatin’ny fanompoam-tsampy.
Rehefa nanjaka 12 taona i Josia dia noravany avokoa ny fanompoan-tsampy rehetra teo amin’ny Israely. Mazava ihany koa ary eto fa Andriamanitra mihitsy no manome an’i Josia ho fanavotana ny Israely tamin’ny fanompoan-tsampy.
Ireo tsy mino sy mandà ny Tompo
Inona kosa ary no mahatonga ny olona izay tsy nety nandray ny Tompo sy nampimonomonona ny olona?
Ny valiny dia satria tsy nomen’ny Ray azy izany.
Rehefa tsy nomen’ny Ray ary tsy notaomin’ny Ray hanatona an’i Jesoa ny olona dia mijery ihany ireo fa tsy mahita ary mihaino ihany ireo fa tsy mandre.
Ny fahagagana nataon’ny Tompo dia hitan’ny olona nefa tsy fantany akory ny hevitr’izany.
Zavatra telo no azo hambara amin’izany:
Tia ny tenany mihoatra ny fitiavany an’Andriamanitra ireto olona ireto.
Ny kibony no nataony ho andriamanitra ka tsy takany ny fahagagana nataon’ny Tompo.
Tsy nihevitra ny hino an’i Jesoa
Donto ny fony fa ny hanina no tao an-tsainy. (and 40-59)
Tsy te hiala amin’ny finoan-drazany ireto olona ireto. (and60-64)
Ry Havana ! Alahadin’ny Baiboly anio ka isaorantsika Andriamanitra.
Tokony hanohana ny fampielezana ny Baiboly isika.
Aoka ho zava-dehibe amintsika ny nahafahana nandika ny Teny amin’ny fitenin-drazantsika.
Ny Tenin’Andriamanitra no mahatonga ho amin’ny finoana marina ka hahatonga antsika mijery ka mahita, mihaino ka mandre ary hahalalantsika fa notaomin’ny Ray isika noho ny fanarahana izay voasoratra amin’izany Baiboly izany.
Manana anjara tokoa isika dia izaho sy ianao ka mandray izany Teny izany.
Anio ihany koa dia fantatsika fa natao ho fankalazana ny fetin’ny mpifankatia.
Noraisin’ny Fiangonana ihany koa io fotoana io ho fitaizana ny vahoakan’Andriamanitra, hahatonga ireo mpifankatia hiorina eo amin’ny vatolampin’i Kristy ary hiroso ho amin’ny fanambadiana kristiana ary ho fanamafisana ny fifankatiavan’ny mpivady efa niroso tamin’izany fanambadiana kristiana izany, hiaina amin’ny fitiavan’i Kristy.
Isika izao no efa notaomin’i Kristy ho tenan’i Kristy, hanahaka an’i Kristy ho isan’ny Fiangonana.
Manoloana ny hafatra dia nisy ny vavaka ho setrin’ny Tenin’Andriamanitra nataon’ny mpitarika. Manoloana ny hafatra dia tsy tanteraka isika koa dia nangataka ny famelan-keloka avy amin’ny Tompo noho izany. Ny Tompo anie hampiorina antsika amin’ny finoana sy ny fitiavana ary fahamasinana . Ho mpanompo mahatoky sy handray ny fanavaozam-panahy avy amin’ny Tompo.
Rehefa izany dia noredonin’ny Mpianakavin’ny Finoana ny hira 244: 1,5 “Ry Jesoa mba henoinao ny feonay mpanomponao”
Izao no teny famelan-keloka noraisin’ny Fiangonana: “Ary hoy ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana hoe: Indro avaoziko ny zavatra rehetra ary fafako ny ranomaso rehetra amin’ny masony. Ary tsy hisy fahafatesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha, fa indro izaho mahary lanitra vaovao sy tany vaovao ary dia tsy hotsarovana intsony ny taloha na ho mby an-tsaina akory aza. Fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay ataoko no haharitra eo anatrehako hoy Jehovah. Dia toy izany no haharetan’ny taranakareo sy ny anaranareo. Amena”
Ny olona voavela heloka dia sahy manambara ny finoany eo anatrehan’ny Andriamanitra sy ny Fiangonana. Ny fanekem-pinoana Nikeana no notanterahan’ny Fiangonana tamin’izany.
Mialoha ny fanambarana ny raharahan’ny Fiangonana dia nanatontosa ny anjara hirany ny Sampana Taninketsa tamin’ny alalan’ny hira hoe : “Adorons Le Seigneur”.
RAKOTOMANANA Andrimbazotiana, Mpitantsoratry ny Fiangonana, no nanatanteraka izany.
Ny 1 Kor.3:17 no nentiny niarahaba ny mpianakavin’ny finoana sy nanombohana ny fanambarana ny asan’ny Fiangonana.
Nisy ny taratasy fampahafantarana ny torohay manoloana ny Covid 19 nalefan’ny Foibe FJKM sy fampirisihana ny Fiangonana hanao ny dimy minitra ho an’ny fahasalamana
Herinandrom-bokatry ny VMFP io herinandro vao mitsidika io.
Hisy ny fanompoam-pivavahana amin’ny alarobia izao izay natokana ho an’ny zokiolona.
Nisy ny fanoloran-jaza dia ny zaza RAHARIJAONA RANAIVOSOLO
Hisy ny fivorian’ny mpihevi-draharaha ny sabotsy 20 febroary 2021 amin’ny 8 ora maraina.
Nisaotra an’Andriamanitra ny Mpitandrina noho ny tombon’andro nomeny ny Fiangonana
Nitaona ny Fiangonana ho amin’ny fidirana SETELA.
Nitaona ny Fiangonana hitrotro am-bavaka ny fankalazana ny faha 160 taonan’ny Fiangonana sy ireo sampana manatanteraka fankalazana. Rehefa izany dia niroso tamin’ny fanoloran-jaza araka izay efa voambara tetsy ambony.
VOADY SY RAKI-PISAORANA
Ny Biraon’ny Fiangonana RANAIVOSON Jacky no namaky izany.
Ireto no hira nangatahan’ny Mpianakavin’ny Finoana izay nanatanteraka ny voady sy raki-pisaorana: FF 34 : 3; FF 37 : 2
Nisy ny Mpianakavin’ny finoana izay nahatratra ny tsingerinandro nahaterahany
Tao ny nisaotra ny Tompo noho ny valimbavaka izay noraisiny .
Ny hira 356 and 3 no nentina nanolorana ny rakitra.
Tamin’izany no nangataham-bavaka ho an’ny toby masina. Nivavaka koa ho an’ny:
– mpitory ny Filazantsara;
– Fiangonana mba hazoto amin’ny asa tsara;
– hetsika tanterahin’ny Hasin’ny Famonjena anio;
– ireo izay hiditra SETELA;
– Komitin’ny fankalazana ny faha 160 taonan’ny Fiangonana;
– Rafitra manatanteraka ny taom-pankalazana;
– Synoda lehibe FJKM;
– Faha 25 taonan’ny Synodam-paritany SPA10;
– Fikambanana Mpampiely Baiboly;
– Fankalazana ny fetin’ny mpifankatia;
– sahirana, ny marary, ny voan’ny tsy fidiny sy ny tsindry hazolena;
– nanatanteraka ny raki-pisaorany sy ny voadiny.
Nivavaka ho an’ny tokantrano kristiana.
Natao ny hira FFPM 731: 3, mialoha ny tondrozotra
Natao ny famakiana ny tondrozotra ary rehefa izany dia natolotra ny tsodrano.
Nofaranana tamin’ny fihirana ny hira FFPM 175 and 6, izao fanompoam-pivavahana izao .
Teo amin’ny fafana: RABAKO Tovohery
Niandraikitra ny fanamafisam-peo: RABIAZAMAHOLY Hery Lanto
Naka ny sary: RAKOTONDRAMBOA Andry
Publié le 7 février 2021 4 avril 2021
Alahady 07 febroary 2021
ALAHADY 7 FEBROARY 2021
“MAMPIORINA NY MINO NY TENIN'ANDRIAMANITRA”
Alahady fahadimy manaraka ny Epifania ity alahady ity, alahady voalohany amin’ny volana febroary hibanjinana ny lohahevitra vaovao, eo amin’ny sahan’ny FJKM, hoe « Mampiorina ny mino ny Tenin’Andriamanitra».
Ny Mpitandrina miana-draharaha RAMILISON Diamondra no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina no nitondra ny hafatra.
Litorjia endriny fahatelo no notanterahana.
Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fiarahabana apostolika dia nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny famakiana ny Salamo119: 129-135 ho fiderana an’Andriamanitra.
Natao ny hira FFPM 20: 1-2-5: “Tsaroanay tokoa izao” taorian’izany ary nanao ny vavaka fiderana ny mpitarika. Nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny fitondrany mahagaga, nafahana mivavaka eto. Midera sy manome vonihahitra ny herin’Andriamanitra sy ny fahatsarany. Mahatsiaro fa Andriamanitra dia Fitivavana ka misaotra Azy satria mikarakara amin’ny antsipiriany ny fiainantsika Izy. Mangataka amin’Andriamanitra ny hanatrehany izao fotoana izao, ho feno ny Fanahiny Masina ka ho hery lehibe ho an’ny tsirairay izay tafavory eto. Izay rehetra atao eto anie dia ho voninahitr’Andriamanitra avokoa.
ANDRIANARIVO Oly, mpampianatra ao amin’ny K1, no nanatanteraka izany.
Nivavaka izy teo am-piandohana. Ny Tenin’Andriamanitra noraisiny hitondrany tantara sy hafatra dia tao amin’ny Jaona 6: 37b “ary izay manatona Ahy tsy mba ho laviko mihitsy”.
Tantaran’i Lita, jiolahy malaza teo an-tanana no nentiny. Mangalatra, misotro toaka, mangaro-paosy no fiainan’i Lita sy ny namany. Raha teo am-pamakiana trano izy ireo dia tonga ny pôlisy. Tafatsoaka ny naman’i Lita, fa izy kosa no nenjehan’ny pôlisy.
. Nisy trano fiangonana teny amin’ny lalany. Nieritreritra i Lita hoe: “Hiditra ve? Sao dia tratran’ny pôlisy anefa?” Nivavaka izy hoe: “Raha misy Andriamanitra, dia aoka Izy hamonjy ahy, ka hiala amin’ny ratsy fanaoko aho”. Niditra tao am-piangonana ihany i Lita. Nisy Tenin’Andriamanitra tena nanindrona ny fony ka tapa-kevitra i Lita ny hanolotra ny fiainany rehetra ho an’Andriamanitra izy. Jesoa nanome toky fa mandray ny rehetra, tsy manda izay manatona Azy.
Nitsangana ny mpikambana Sampana Sekoly Alahady, namerina namaky ny Tenin’Andriamanitra ao amin’ny Jaona 6: 37b, ary nanao ny hira FFPM 772: 1-2 “Manatona, manatona”.
Natao avy hatrany ny hira FFPM 786: 1, 4: “Ny Teninao Jehovah, izay ianaranay”, mialoha ny vakiteny.
RAZAFINDRABE Mamy Bam, no nivavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina ary RAZAFINTSALAMA Hantanirina no namaky misesy ny perikopa voalahatra. Samy Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Fananana ireo tompon’anjara ireo.
Ny perikopa : Genesisy 15:1-16 ; Lioka 5 : 1-11 ; Romana 4 : 13-25.
Natao ny hira FFPM 190: 1-2: “Ry Fanahy mpanazava”, mialoha ny toriteny.
“Mampiorina ny mino ny Tenin’Andriamanitra”. Izany no lohahevitra fitaizam-panahy hoentina mamakivaky ity volana febroary ity. Ny perikopa nandraisana ny hafatra dia ny Genesisy 15:1-16.
Tantara mampiseho ny fifandraisan’i Abrama amin’Andriamanitra. Nandresy fahavalo maro Abrama, nefa mbola nisy tahotra sy tebiteby tao aminy. Hoy Jehovah: “Aza matahotra, ry Abrama; Izaho no ampinganao sy valim-pitia lehibe indrindra ho anao”. Teny nentiny hampiorenany ny finoany izany Teny izany.
Inona moa ny fampiorenam-pinoana ny amin’ity Teny hoe: “Aza matahotra ry Abrama”
Mampahery ny olony, Andriamanitra;
Manome toky azy mandrakariva Izy amin’izay mpanompo matoky ka miandrandra Azy.
Mampahery ny olony Jehovah Tompo
Ny bokin’ny Genesisy 15 dia maneho zavatra roa lehibe:
Mitaona ny olona amin’ny finoana ary hatoky an’Andriamanitra tsara sy hanompo an’Andriamanitra tsy misy fihambahambana
Teny anankiroa no hilazana io fampaherezana io: “Ho ampinganao aho”; “Hamaly vavaka anao”.
Tsy fitaovam-piadiana mahery vaika no nentin’i Abrama, fa vahoaka. Olona mpifindra monina, fa tsy olona hiady akory. Nefa dia nandresy firenena maro izay mitambatra. Notanterahan’Andriamanitra tokoa fa Izy no ampinga. Hita koa izany ao amin’ny Lioka 5: 1-11.
Ny dikan’ny hoe Petera dia vatolampy, afaka miaritra ny zavatra rehetra. Tamin’ny asa nataony, mpanarato izy, tsy nahazo na inona na inona tamin’ity andro ity, fa nitondra tanam-polo mody. Nalain’i Jesoa ny sambony anefa, ary hita ny maha ampinga an’i Jesoa. Nasainy narotsaka indray ny harato. Nanaiky i Petera ary be ny trondro azo. Andriamanitra dia mankahery ny olony tokoa.
Manome toky ny mpanompony Andriamanitra
Efa kivy mihitsy i Abrama. Rehefa nandinika ny fiainany izy dia lasa vinany manoloana ny Teny nomena azy.
Toa izany isika, miteny amin’ny Tompo hoe:”Mba asehoy ahy ny valim-bavaka omenao”.
Ho fijoroana vavolombelona dia nitantara ny Mpitandrina hoe nitady porofo izy tamin’ny antson’Andriamanitra. Izy mantsy dia tsy mba nahay niteny fa miboredika. Tsy nampoiziny ny fomba nahatongavany tao amin’ny Foibe FJKM, ka lasa nisoratra anarana ho mpiomana.
Toa an’i Abrama nasain’Andriamanitra nivoaka ary nanontaniany raha mahisa kintana izy, sy trondro an-dranomasina. Manome toky Andriamanitra ary dia natoky Abrama.
Mahay ny zavatra rehetra mihoatra noho ny izay fantatsika Andriamanitra. Ny fitahiany dia tena lehibe.
Aoka isika ho tahaka an’i Abrama. Matoky amin’ny zavatra rehetra.
Momba anao foana Andriamanitra, amin’ny fotoana rehetra. Izy no hiantehero amin’ny zavatra rehetra ataonao, na amin’ny tsy misy dikany na amin’ny misy dikany.
Mampijoro antsika ho mpanompony ilay Andriamanitra ivavahantsika. Izy no manome antsika ny fandresena rehetra ho entina manompo Azy sy maneho ny voninahiny amin’ny fiainantsika.
Feon-javamaneno fohy taorian’ny toriteny.
Andriamanitra dia manome fahalalana vaovao, mampahery, mitondra amin’ny fandinihan-tena.
Ianao Tompo nampahery an’i Abrama, nanome toky azy. Ho anay rehetra izany Teny izany.
Nivily tamin’ny lalanao izahay ka nitady ampinga hafa ka adino tanteraka ny Teny fikasana.
Mifona izahay noho ny ota efa fantatra, ny tsapa na ny tsy tsapa. Diovy Tompo mba ho afa-pahotana. Ampio izahay hahay hitandrina ny Teninao mba tsy hanotanay intsony”.
Natao ny hira HF 39 “Tompo ô Izay mahita”.
“Izay mandre ny teniko ka mino Izay naniraka Ahy no manana fiainana mandrakizay, ka tsy hohelohina” (Jaona 5:24)
“Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay.” (Jaona 3:16)
“Ary amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesoa.” (Romana 8:1)
Rehefa avy nandray ny Teny famelan-keloka dia natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 545:1 “Endrey izany hafaliana”, avy eo dia niara-nanonona ny Fanekem-pinoana apostolika.
Narahina feon-javamaneno fohy izany; avy eo dia nanao ny anjara hirany ny Sampana Tanora Kristiana: “Oh, how I love Jesus”.
RAZAFIMAHARO Mamy, Mpitantsoratra, no nilaza ny raharaham-piangonana.
Ireto manaraka ireto ny vaovao nisongadina:
FJKM : Herinandro famelabelaran-kevitra momba ny fitiavana
SPA : Toro marika iombonana noho ny Covid 19
SAFIF: Taom-baovaon’ny sampana
« Ny Tenin’Andriamanitra, fahatokiana sy fiadanana »
14 febroary: alahadin’ny Baiboly
-Faha 50 taonan’ny Hasin’ny Famonjena : Sakafo fankalazana ny 21 febroary
-SA: fianarana mifandimby K6/K10 – K1/K5
-VVM: Fivarotana ranomboankazo isaka ny alahady Fandraisana
-AFF/VMFP 15 febroary: fotoana manokana ho an’ny Mpivady
-Fanamafisana nataon’ny Mpitandrina: Antso ho an’ireo te hanao SETELA;
-Fanentanana : Fiofanan’ny Diakona sy ny Loholona ny tontolo andron’ny sabotsy 13 febroary;
Mitondra am-bavaka ireo komity fankalazana ny faha 160 taonan’ny Fiangonana ary 30 sy 20 taonan’ireo Sampana isaky ny amin’ny 9 ora alina.
Nasain’ny Mpitandrina nitsangana ireo teraka vola Janorary. Ny I Korintiana 2: 9 no Tenin’Andriamanitra natolotra azy ireo: “Izay tsy mbola hitan’ ny maso ary tsy mbola ren’ ny sofina, na niditra tao am-pon’ ny olona, na inona na inona no efa namboarin’ Andriamanitra ho an’ izay tia Azy ”.
Nitondra azy ireo am-bavaka ny Fiangonana.
Ny hira FF7 “Tsy hainay ny hangina ”no nohiraina mandritra ny nanaovan’izy ireo ny fanatitra teny amin’ny alitara.
13 ny isan’reo nanatrika ny fotoana tamin’ny 10 ora ary 33 tamin’ny 7 ora. Nitotaly 49 izany.
RANAIVOSON Jacky, Mpitambolam-piangonana, no namaky ireo voady sy raki-pisaorana.
-Fisaorana an’Andriamanitra noho ny nahazoana fahasalamana, noho ny nahatratrarana ny faha 45 taonan’ny fanambadiana.
Ny hira FF7 no notanterahina tamin’ny rakitra “anniversaire”, ny FF 30 kosa mandritra ny fanantazana ny rakitra, izay niandraiketan’ny Vaomieran’ny Vola.
Ny hira FFPM 432: 2: “Mandra-piavin’ny Tompo, miasà!” no hira vavaka natao teo am-pitsanganana ho fanavaozana ny fanoloran-tena sy fanolorana ny rakitra. Nofaranana tamin’ny “Amena”.
Nitohy ny feon-kira mandritra ny fanolorana ny fanatazan-drakitra ary notohizana tamin’ny vavaka fangatahana.
Ny Mpitandrina miana-draharaha, izay nitarika ny fotoana ihany, no nanao ny vavaka
Nivavaka ho an’ny FJKM, ireo lamin’asa, fotodrafitrasa, Synoda Lehibe ho tanterahina amin’ny volana aogositra, Synodam-Paritany, Mpitandrina evanjelistra,Toby Fifohazana. Nangata-pitahiana ho an’ny FJKM Amparibe Famonjena sy ny mpianakavin’ny finoana. Nitondra am-bavaka ireo nanao raki-pisaorana sy nangata-bavaka ho an’ireo zaza vita Batisa. Nivavaka ho an’ireo manao taom-pankalazana, mba ho ny herin’ny Fanahy Masina no hitarika ny komity. Hahefa be izy ireo, ho hery lehibe eto amin’ny Fiangonana. Mitondra am-bavaka ireo asam-piangonana rehetra (Vaomiera; SSAA). Mivavaka ho an’ny Mpitandrina, ny Birao. Ireo katekomena anie hiroso lalina tsy ho tratry ny fihemorana.
Fantatrao Tompo ny momba anay tsirairay. Miangavy Tompo, vangio sy sitrano ireo marary, hampaherezo ireo azom-pahoriana. Mitalaho ho an’ny firenena: Sitrano, tsaboy ny valanaretina, vonjeo ny kere, ny tsy an’asa, ny mahantra.
Vavaka mangina hahafahan’ny tsirairay mitondra ny faniriany manokana.
Nitohy avy hatrany tamin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo ny fotoana.
Nohiraina ny FF 28 “Efa voadinikao Andriamanitra o! ” teo am-piomanana.
Novakina ny Soratra Masina, natao ny vavaka fanandratana ary ny hira fihobiana Antema 1 “Masina, Masina”.
Ireto manaraka ireto ny hira natao nandritra ny fotoana: FFPM 109:1, FFPM 107, HF 29.
Natao ny vavaka ary nohiraina mandritra ny fanantazana ny Raki-pisaorana sy fanangonana ny kapoaka ny hira FFPM 1 : 1, 2, 3.
Natao ny hira FFPM 427:1 “Ho vavolombelonao » ary novakina ny tondrozotra 2021.
Hafatra: “Miorena tsara amin’ny finoana ianareo” 1 Petera 5: 9
Natolotra ny tsodrano; nohiraina ny hira FFPM 699:7: “Ankehitrio, Anao ny fiderana”. Nofaranana tamin’ny Amena nohiraina sy vavaka mangina izany.
Nikirakira ny fafana : RAKOTONDRAMBOA Andry
Nikirakira ny fanamafisam-peo: RAMAHERY Yves
Naka ny sary : RAMAHERY Hasina
Nitendry orga: IRIMANANA Eninkaja